प्रेम - साप्ताहिक
राजकुमार ह्यारीको ब्लाइण्ड लभ
साप्ताहिक संवाददाता , पुस ८, २०७४
ह्यारी र मार्केलको ब्लाइन्ड डेटको प्रसंग पनि रोचक छ, जसलाई मार्केलले बीबीसीसंगको अन्तवार्तामा उल्लेख गरेकी छिन् । मार्केल भन्छिन्— ब्लाइन्ड डेट फिक्स गर्ने साथीले मलाई ह्यारीका बारेमा केही पनि बताइनन् । किनभने उनको नाम लोकप्रिय थियो । यदी ह्यारीको नाम मैले पहिले नै थाहा पाएकी भए मलाई थप तनाव हुन्छ भनेर भनिएन । पुरा पढ्नुहोस्
ब्वाइफ्रेन्ड हुँदा कस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ
साप्ताहिक संवाददाता , जेष्ठ ७, २०७४
बौद्धस्थित अरुणिमा उच्च माविमा पढ्दा एक जना सिनियर दाइ मन पर्थे । दुई ब्याच सिनियर । म आठ कक्षामा पढ्थें, तर मनको कुरा भन्न सकिएन । साथीहरू सबैले केटा साथी बनाएका थिए । ब्वाइफ्रेन्ड हुँदा कस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो । पुरा पढ्नुहोस्
ब्वाइफ्रेन्ड हुँदा कस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो
साप्ताहिक संवाददाता , चैत्र २१, २०७३
बौद्धस्थित अरुणिमा उच्च माविमा पढ्दा एक जना सिनियर दाइ मन पर्थे । दुई ब्याच सिनियर । म आठ कक्षामा पढ्थें, तर मनको कुरा भन्न सकिएन । साथीहरू सबैले केटा साथी बनाएका थिए । पुरा पढ्नुहोस्
पावेललाई प्रेम गर्छु
कृष्ण भट्टराई, फाल्गुन १६, २०७३
गौरी मल्ल नेपाली चलचित्र क्षेत्रको लोकप्रिय नाम हो । चलचित्र ‘सन्तान’ बाट प्रारम्भ भएको मल्लको अभिनय यात्रा ‘कन्यादान’ हुँदै अघि बढेको हो । पुरा पढ्नुहोस्
अमर न्यौपानेको पहिलो प्रेम
साप्ताहिक संवाददाता , फाल्गुन १४, २०७३
मनपर्ने केटीसँग मेरो सानैमा प्रेम भयो । ६ वर्षकै उमेर थियो होला । हामीले माटोको सिन्दूर अनि माटोकै खाना बनायौं । पुरा पढ्नुहोस्
मामा भनेर चिनाइन्
साप्ताहिक संवाददाता , फाल्गुन ११, २०७३
मेरो पहिलो प्रेम ९ कक्षा पढ्दा भयो । हेटौंडाको श्री ज्योति उमाविमा म कक्षा ९ मा पढ्दा उनी ७ कक्षा पढ्थिन् । पुरा पढ्नुहोस्
रोजिन शाक्य, फाल्गुन ६, २०७३
कुनै व्यक्ति किन मायामा पर्छ? किन कसैको प्रेम सम्बन्ध दीर्घकालीन हुन्छ त कसैको प्रेम पानीको फोका सावित हुन्छ? यस विषयमा मनोवैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले अनेकन् खोज एवं प्रयोग गरेका छन् भने अनेकन् सिद्धान्त विकास गरेका छन्। पुरा पढ्नुहोस्
माया लाएको छ भने लुकाउनुपर्छ, नत्र समाजले कर्के नजर लगाउँछ भन्ने जमाना पनि थियो । पुरा पढ्नुहोस्
जितेन्द्र साह, जेष्ठ ९, २०७१
भारतमा १२ मेमा मतदान सम्पन्न भैसकेको थियो। सर्वत्र झन्डै ३६ दिनसम्म नौ चरणमा भएको निर्वाचन परिणामको प्रतीक्षा गरिंदै थियो पुरा पढ्नुहोस्
राउटे युवायुवतीको प्रेमलीला
दुर्गालाल केसी, फाल्गुन २, २०७०
सहरका युवायुवतीहरू विभिन्न पार्क तथा मन्दिरहरूमा भेट नै गफगाफमा समय बिताउँछन्, तर जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै पुरा पढ्नुहोस्
नरेन्द्र रौले, फाल्गुन २, २०७०
तीन अक्षरको 'आई लभ यु' जति छोटो छ, भन्न त्यति नै गार्‍हो। मैले पहिलो पटक मन पराएकी युवतीलाई 'आई लभ यू' भन्नै सकिन । पुरा पढ्नुहोस्